Kutaa 1ffaa keessatti akkuma ibsamee ture barattoonni tigireebarattoota oromoon jecha jibbisiisaa barataa oromoon jechuun goolii umuun barataan oromoo hedduun akka ari'amu,lubbuun isaa darbu fiqaamni isaa hirtu ibseen ture.
Kutaa 2ffaan immoo 1 sochiin kun tplf akka ta'e kan mirkaneessuu fi barattootni oromoo maal akka gochaa jiran kan of keessatti qabateedha. 2. TPLF BARATTOOTA TIGIRAAY
BARATTOOTA OROMOO IRRATTI KAKAASAA JIRA.
Akuma beekamu tplf barattoota oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu tooftaa dhoksaan inni fayyadamu keessaa tokko,jecha jibbamaa ta'e barataa oromoon unversity kessatti abaarsisuun barataa oromoo ;ajjeesaa,qaama hir'isaa fi barnoota irraa akka ari'achaa jiru ragaa qabatamaan bira ga'ee mirkaneessuu danda'eera. Innis 1 bara 2002 jimmaa unversity keessatti lola barataa oromoo fi tigiree giddutti umamee tureen barataa oromoo 4 fi shamarree tigiree 1 tu complete dismisal ari'amee ture.
Garuu shamarree tigiree kanaaf grade report fi clearance kennamee fi maqalee unversity galte barnoota akka itti fufte bira ga'amee ture.barattootni oromoo jimmaa unversity,geggessaa opdo jimmaa unversity fi biiroo barnoota oromiyaa gaafatanii turan,shamarreen kun barachaa jirti garuu barataan keenya 4 ari'amee jira jedhanii yemmuu gaafatan deebiin kennameef isin ABO dha, ergama ABO galmaan ga'aa jirtu, kanaaf of eeggadhaa ni ari'amtu isin illee jechuun barattoota keenya sodaachisan. Haaluma wal fakkaatuun jeequmsa bara 2003 mizan tepi
unversity tepi cumpos itti umamee tureen,waraanni tplf mooraa seenanii barattoota oromoo 3 meeshaan rukutanii 83 immoo uleefi sadafii qawween rukutanii walii galatti barataa oromoo 86 qaama hir'isan, garuu shamarree tigiree tokko ar'ina isheenis maqalee unversity galtee akka barnoota itti fuftee qorannaan adeemsiseen mirkanesseera.
Walumaagalatti tplf barattoota oromoo ajjeesuuf,qaama hir'isuu fi barnoota irraa ari'uuf tooftaa kana fayyadamaa akka jiru mirkaneessuu danda'eera. HAA TA'U MALEE
BARATAAN OROMOO DIINA KEENYA HABASHAA WALIIN HARIIROO AKKAMII QABA? Dargaggoo/shamarree oromoo taatanii kanneen diina keenya lafarraa nu balleessee , wallaalummaatti nu hambisee dachee oromiyaa qabeenya ofii isaa godhachuuf deemu kana
irraa adaraa of qusadhaa! Yaa dargaggoo oromoo shamarree habashaa ati niitii godhatte/niitii godhachuuf deemtu kun Abbaa fi lammiin ishee Abbaa kee fi lammii kee irraa kan cidhaan muratee,harka muree,akka hin dhalchinee fi sanyiin isaa akka hin heddummannee fi sangoomsaa turee fi jiruudha.ati garuu maaf kana hin yaadattu? ,ati illee yaa shamarree
oromoo dargaggoo habashaa ati itti heerumuufi ykn jaalallee godhatte kun bari harmoota keenya; kan harma muraa ture,haadhaa fi intala wal biratti hidhee gudeedaa ture,kan haadha ajjeesee ilmoo qofaa hambisaa ture, kan dubartii ulfa shukkaa itti dhahee mucaa garaati baasaa tureedha. Ati garuu wajjin ciista. Adaraa keessan waqayyoon sodaadha
habashaa irraa of eeggadhaa!. Nuti yemmuu akkasitti isin ilaallu sodaa isinitti hin fakkaatin, kana booda tarkaanfii isin irratti fudhatamuuf itti gaafatamummaa jala hin jirru nuti.INJIFANNOON UMMATA OROMOOF !!!